(L ကို) ကိုပျော်ရွှင်မှုမော်လီကျူး Dopamine လား? (2008) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
(L ကို) ကိုပျော်ရွှင်မှုမော်လီကျူး Dopamine လား? (2008)
မှတ်ချက်များ dopamine နှင့် ပတ်သတ်၍ အငြင်းပွားစရာတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ပျော်ရွှင်မှုခံစားမှုနောက်ကွယ်ရှိမရှိဆိုသည်မှာဖြစ်သည်။ dopamine သည်လိုချင်တပ်မက်မှုနှင့်တွန်းအား (သို့) လိုချင်ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းကောင်းစွာသိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သုတေသီများသည်အကြိုက်ကိုအစားအစာစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်လိုခြင်းနှင့်ကွဲလွဲခဲ့ပြီး dopamine သည်အစားအစာ၏ hedonic ရှုထောင့်များတွင်မပါဝင်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်လိင်၊ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှင့်ချစ်ခြင်းနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ပါသလား။ လေ့လာမှုများအရမိမိကိုယ်ကိုပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအစီရင်ခံစာများသည် dopamine အဆင့်နှင့်တူညီကြောင်းရှင်းလင်းစွာပြသသည်။
ဦးနှောက်စိတ်ကြွဆေးများကတစ်ဦးကဘလော့ Post ကို
အာရုံခံအပျြောအပါးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဦးနှောက် neurotransmitter dopamine လား? Neuroscientifically စိန်ခေါ်ဘလော့ဂ် dopamine အာရုံခံအပျြောအပါးပေမယ့်အခြားအရာတစ်ခုခုဖျန်ဖြေတော်မမူကြောင်းယုံကြည်သူသိပ္ပံပညာရှင်တို့တွင်ရာထူးအတွက်ခြင်းများ, အလိုဆန္ဒနှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုရှိပါတယ်။
dopamine ကူးစက်မှုနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအတွေ့အကြုံများ (ဥပမာအစာစားခြင်း၊ လိင်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများ) ကိုတည်ထောင်သောအခါလူများစွာက dopamine သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သာယာမှုခံစားမှုအတွေ့အကြုံအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုနားလည်စေခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာ dopamine ဟာအပျော်အပါးနဲ့မဆက်စပ်တာကိုသုတေသီများသတိပြုမိလာသောအခါသိပ္ပံပညာသည်နောက်ဆုံးတွင်ဖောင်းပွလာသည်။
သုတေသနပညာရှင် Kent Berridge သည်ဤဒေသတွင်ကျယ်ပြန့်သောသုတေသနပြုလုပ်ခဲ့သည်။ dopamine သည်အရသာရှိသည့် hedonics ၏အတွေ့အကြုံကိုမပြောင်းလဲကြောင်းသူတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အခြေခံအားဖြင့် Dopamine သည်အရသာကောင်းသည်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပါ။ ဒီတော့ဒီဟာကဘယ်လိုလဲ။ ကောင်းပြီဥပမာအားဖြင့်အရက်သည်အစားအစာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်လူများသည်ဘီယာနှင့်ပီဇာတို့ကိုအတူတကွသောက်သုံးလေ့ရှိကြသည်။
အရက်သေစာသည်လူတစ် ဦး ၏ opioid စနစ်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကြောင့်၎င်းသည်အရသာပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်၏သီးခြားနေရာများတွင် mu-opioid receptor ကိုဖွင့်ပေးခြင်းသည်အာရုံခံအရသာကိုပိုမိုတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အစာကျွေးသောပီဇာသည်အရက်သို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူကဲ့သို့သောဘိန်းဖြူကိုစားသုံးပြီးနောက်တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် dopamine တိုးများလာခြင်းကအရာဝတ္ထုများကိုပိုမိုအရသာမဖြစ်စေပါ။
Berridge သည်တိရိစ္ဆာန်များကိုစမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူသည် ဦး နှောက်တွင်“ hedonic hotspots” ဟုခေါ်သည့်အရာကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဟော့စပေါ့များတွင်သဘာဝအပျော်အပါးကိုတိုးပွားစေသော hedonic gloss သည် mu opioids နှင့် endocannabinoids ကဲ့သို့သော ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများဖြင့်ခြယ်သခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဘိန်းဖြူနှင့်ဆေးခြောက်၏သဘာဝ ဦး နှောက်ပုံစံများဖြစ်သည်။ ဒီ neurochemical receptors တွေကို activate လုပ်လိုက်ရင် (hedonic hotspot ထဲကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသေးငယ်သောအစက်လေးများကိုနာကျင်ခြင်းမရှိသော microinjection မှတဆင့်) ကိုအသုံးပြုပါကချိုမြမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ 'ကြိုက်နှစ်သက်မှု' တုံ့ပြန်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။
ထို့ကြောင့် opioid receptors နှင့် endocannabinoid receptors များတိုးပွားလာခြင်းသည်အစားအစာကိုအနည်းဆုံးကြွက်နှင့်ကြွက်တို့တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။ ကြွက်သို့မဟုတ်ကြွက်တစ်ကောင်သည်အစာပိုစားလျှင်သင်မည်သို့ငရဲသို့ပြောမည်နည်း။ သုတေသီများသည်အစားအစာတစ်မျိုးတည်းကိုစားသုံးခြင်းသည်မည်မျှမည်မျှကြိုက်ကြောင်းပြောရန်သုတေသီများသည်အမှန်တကယ်ကြွက်တစ်ကောင်အားမျက်နှာကိုကြည့်နိုင်သည်။ သူတို့၏မျက်နှာထားသည်လူတို့၏မျက်နှာနှင့်တူညီသောပုံစံဖြင့်သူတို့၏စိတ်ခံစားမှုကိုပျောက်စေသည်။ သို့သော်အပျော်အပါးအတွက်မှန်ကန်သောဖော်ပြချက်ဝေါဟာရကိုမည်မျှကောင်းမွန်စွာအရသာရှိသနည်း။ ပျော်ရွှင်မှုကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး hedonics အရသာသည်အပျော်အပါးဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ အစားအစာကိုအရသာရှိရှိအရသာရှိရှိရှာမတွေ့ချင်ပေမယ့်ခြုံငုံ။ anhedonic လို့ခံစားရသူတစ်ယောက်ကိုငါမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂလဒိive္ anhedonia ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်ဤ site“ Negative Symptom Initiative” တွင်တွေ့နိုင်သည့်အမျိုးအစားအဆင့်အမျိုးမျိုးကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။ စကေးအပေါ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်; လူမှုရေးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများခံစားမှု၏အကြိမ်ရေ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုကာလအတွင်းပျော်မွေ့မှုအတွေ့အကြုံ၏ကြိမ်နှုန်း၊ အပန်းဖြေခြင်း / သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပျော်မွေ့ခြင်းအတွေ့အကြုံ၏ကြိမ်နှုန်း။ ဒါကြောင့်ဒီအပျော်တမ်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းအတာအတွက်အရသာဟီဒနစ်ကိုမဖော်ပြထားပါဘူး။ ထို့ကြောင့် hedonics အရသာသည်အခြားအာရုံခံအပျော်အပါးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှပျော်ရွှင်ခြင်းသို့မဟုတ်သီးခြားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပစ္စည်းများအတွက်သီးခြား neurotransmitter များပါဝင်ခြင်းကိုဖော်ပြသည့်လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများမှခွဲထုတ်နိုင်သည်။
dopamine ၏အပျော်အပါးတွင်အခန်းကဏ္ to နှင့်ပတ်သက်သောသဲလွန်စအချို့သည်ကြွက်များကိုလေ့လာခြင်းမှရရှိသည် Kent Berridge's website ကို) ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရသုတေသီတွေကကြွက်တွေရဲ့နျူကလိယပ်မှာကြွက်တွေကို ၉၉% လျှော့ချပေးတယ်။ သုတေသီများတွေ့ရှိချက်အရကြွက်များသည်မိမိကိုယ်ကိုအစာမစားနိုင်တော့ပါ။ Dopamine သည်အပြုအမူကိုအလုံးစုံလှုံ့ဆော်ပေးပြီး ၄ င်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဖိနှိပ်ခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တိရိစ္ဆာန်သို့မဟုတ်လူတစ် ဦး သည်အရာရာကိုပြုလုပ်ရန်မက်လုံးကိုလျော့နည်းစေသည်။ သုတေသီများသည်ကြွက်များကိုအစားအစာကျွေးပြီးသူတို့၏အစာကိုမည်မျှနှစ်သက်သည်ကိုပြောပြရန်သူတို့၏မျက်နှာအမူအရာများကိုစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။
ဤအခြေအနေများတွင်ကြွက်များအနေဖြင့်ပုံမှန် dopamine ပမာဏရှိသည့်အခါအစာသည်အရသာရှိရုံမျှနှင့်ဤ neurotransmitter ကိုလျှော့ချခြင်းသည်စားသုံးခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုမလျော့နည်းစေကြောင်းဖော်ပြသည်။ အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုအရ dopamine ပါဝင်မှုမြင့်မားသော Mutant ကြွက်များသည်ချိုသောသကြားအစားအစာများကို“ လိုလား” သော်လည်းပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းပြခဲ့သည်။ ဆိုလိုတာကသူတို့ဟာအစာစားဖို့ပိုဖြစ်နိုင်တယ်၊
အာရုံခံအပျော်အပါး၏တိကျသောရှုထောင့်များအတွက် dopamine ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက်သက်သေသာဓကမှာကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အခန်းကဏ္asideကိုလုံးဝဖယ်ရှားပေးသောသုတေသီများနှင့်ကျွန်ုပ်သဘောမတူပါ။ တစ်ချက်အနေဖြင့် dopamine receptors ကိုတားဆီးစေသောစိတ်ရောဂါသည်များသည်လှုံ့ဆော်မှုကိုလျော့နည်းစေသည့်အပြင် anhedonia ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းအရင်းအချို့ကိုသိရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆုလာဘ်နှင့်ဆန္ဒကိုဆုလာဘ်နှင့်ခွဲခြားရန်အချိန်စောနိုင်သည်။ Dopamine သည်ထိုစိတ်ခံစားမှုနှစ်ခုလုံးတွင်အမှန်တကယ်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်သည်။ dopamine ကိုလက်ခံသော receptors များသည်နေရာဒေသအမျိုးမျိုးတွင်မတူညီသောအရာများလုပ်ဆောင်သည်ဟူသောပြproblemနာလည်းရှိသည်။ အခြား ဦး နှောက်inရိယာများတွင် dopamine receptor activation သည်အလိုဆန္ဒကဲ့သို့သောကွဲပြားသောတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်နေနိုင်သည့် mesolimbic system (nucleus accumbens) တွင် receptors များ၏ activation သည်အပျော်အပါးနှင့်ဆက်နွယ်နေနိုင်သည်။
Dopamine agonist မူးယစ်ဆေး
Pramipexole dopamine agonist ဆေးသည် D2 / D3 အမျိုးအစား dopamine receptors ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီး anhedonic anti -onic ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်ကိုပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည် dopamine အာရုံခံအပျော်အပါးနှင့်တိုက်ရိုက်ပတ်သက်မှုရှိကြောင်းညွှန်ပြသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကြောင့် dopamine receptor activation တိုးပွားလာခြင်းဖြင့်လူတစ် ဦး ၏ပျော်ရွှင်မှုကိုတိုက်ရိုက်တိုးပွားစေနိုင်သည်။ ငါယခင်ကမူးယစ်ဆေးတဏှာကိုလျှော့ချရန် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်ဒေသ၌ဤ receptor တိုးမြှင့်သော D2 dopamine ဗီဇကုထုံးအကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ ကိုကင်းသည်ပြင်းထန်သောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှု (ဆိုလိုသည်မှာအပျော်အပါး) ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း၊ လက်ခံသူအားလျှော့ချသောကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းကြောင့် anhedonia ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုလူသိများသည်။ Kent Berridge သည် dopamine ၏အခန်းကဏ္discountကိုအခြေခံအားဖြင့်လျှော့ချပုံရသည်။ ၎င်းသည်စိတ် ၀ င်စားမှု (အထူးသဖြင့်လိုချင်ခြင်းသို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒ) ကိုသာဖျန်ဖြေပေးသည်ဟုယုံကြည်သည်။ သူလည်းသူ့အမြင်များတွင်အထီးကျန်မဟုတ်ပါဘူး။
ကျနော်တို့နှစ်သက်တာက dopamine လုပ်တာထက်အကောင်းဆုံးကိုလိုချင်တာထက်ပိုလိုချင်တာကိုကျွန်တော်တို့အကြံပြုပါတယ်။ များသောအားဖြင့် 'liking' နှင့် 'wanting' တို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြွေစေ့၏နှစ်ဖက်စလုံးကဲ့သို့သာယာသောမက်လုံးများအတွက်အတူတကွသွားလေ့ရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များအရ 'လိုချင်ခြင်း' သည် ဦး နှောက်ထဲတွင် 'အကြိုက်' နှင့်ကွဲလွဲနိုင်ပြီး mesolimbic dopamine system များသည် 'wanting' ကိုသာဖြန်ဖြေပေးသည်။
တဦးတည်းလည်းလိင်သို့မဟုတ်လူမှုရေးမှဆင်းသက်လာပျော်မွေ့ရာမှအရသာ hedonics ခွဲခြားရန်ဂရုစိုက်ရပါမည်အာရုံခံအပျြောအပါးနှင့်တစ် categorizing အကြောင်းကိုအလွန်သတိထားဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ Dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများလိုလားသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိုလားသူလူမှုရေးနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်လူသိများကြသည်။ သူတို့ဟာထင်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလိင်ဆက်ဆံသို့မဟုတ်လူမှုရေးဖြစ်ခြင်းကနေရယူအပျော်အပါးမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်အာရုံခံအပျော့စားတစ်ခုနှင့်အာရုံခံစားမှုပျော်ရွှင်မှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိပါသလား။ အာရုံကြောဆိုင်ရာအပျော်အပါးတစ်ခုကိုဖျန်ဖြေပေးသည်ဟုထင်ခြင်းသည်မှားသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရားများနှင့်အတူအနည်းဆုံးသုံးကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးဝါးများကြိုးဖြစ်ကြသည်။ dopamine တိုးပွားလာခြင်း၊ NMDA receptor activation ကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့် mu-opioid activation တိုးပွားခြင်းတို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါး၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားများကိုလွတ်လပ်စွာအကျိုးပြုသည်။ ဤရွေ့ကားတိကျသော neurotransmitters ပြင်းအားပြောင်းလဲပစ်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်နျူကလိယ accumbens အတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားလျော့နည်းသွားမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီတော့တိကျတဲ့ neurotransmitter အစား၊ ၄ င်းသည်အလုံးစုံရဲ့ neuron လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်သူတို့ရဲ့အသားတင်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်တယ်။ neurotransmitter သည်လက်ရှိတွင်မရှင်းလင်းသို့မဟုတ်အလွန်ရှုပ်ထွေးလွန်းသောအဆင့်များ၌ထပ်တူထပ်နေပြီး၊ ဆုပေးပွဲတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်အခြား neurotransmitter နှင့် intracellular cascades များစွာသောကြောင့် neurotransmitter တစ်ခုသို့အကြွင်းမဲ့တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်းသည်အချိန်မတန်ပါ။ သုတေသီများသည်အနိမ့်အမြင့်ပြောင်းလဲမှုဆီသို့ ဦး တည်သွားပြီးတိကျသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာအခြေအနေနှင့်ဆက်စပ်သည့်အခါတိကျသော neurotransmitter ကိုတွဲဖက်ထားလေ့ရှိသည်။
ဦး နှောက်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးခြယ်လှယ်ခြင်းသည်မည်သည့် neurotransmitter ကိုတိကျတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောပြဖို့သင်ကြားပေးနေချိန်မှာအဲဒါဟာအကြွင်းမဲ့အတိုင်းအတာမဟုတ်ပါ။ ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် transcranial magnetic stimulation သည် ၄ ​​င်းတို့၏ function ကိုဆုံးဖြတ်ရန်တိကျသော ဦး နှောက်ဒေသများကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းသို့မဟုတ်ခေါက်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည့် noninvasive မြေပုံနည်းစနစ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ အကယ်၍ တိကျတဲ့ ဦး နှောက်ဒေသတစ်ခုရဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို TMS ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီး (“ ထွက်ခေါက်” ကဲ့သို့) လုပ်ဆောင်မှုကိုသတ်မှတ်ထားသောလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်ပိုမိုဆိုးရွားစေလျှင်၎င်းသည်သုတေသီများအားထိုနေရာတွင်ထိုလုပ်ငန်း၌ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟူသောအတွေးကိုပေးသည်။ သို့ရာတွင်၎င်းသည်ဒေသနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်များကိုသာပြောကြားသည်မှာ၎င်းသည်လုံးဝအပြုသဘောပါ ၀ င်မှုမျိုးမဟုတ်ပေ။
သီအိုရီများကိုစမ်းသပ်ရန်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွင် ဦး နှောက်ဒေသမှခေါက်ထွက်ခြင်းကဲ့သို့တူညီသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်“ သဘာဝ” ဖြစ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးသည် ဦး နှောက်ကိုရွေးချယ်မှုမရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိသည်။ dopamine agonist သည် anhedonia ခံစားချက်များကိုလျော့နည်းသွားစေသည့်အခါ dopamine သည်အပျော်အပါးနှင့်လုံး ၀ ပါ ၀ င်နေသည်ဟုမဆိုနိုင်ပါ ဦး နှောက်ဒေသများကို TMS နှင့်“ ထွက်ခေါက်” သကဲ့သို့အချို့သောအခြေအနေများတွင် dopamine သည်အပျော်အပါးနှင့်ဆက်နွယ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားပြောရုံမျှသာဖြစ်နိုင်သည်။ တစ် ဦး က dopamine D2 / D3 agonist အသိပေးနေစဉ်, သူက ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု၏အသစ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုဖန်တီးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, D2 / D3 agonist သည် D1 receptor subtype (D2 / D3 autoreceptors ၏ဆွမှုမှလျှော့ချသော dopamine ဦး နှောက်အဆင့်ဆင့်) ၏ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်တိုင်းတာရန်နှင့်တိုင်းတာရန်ခက်ခဲသောမရည်ရွယ်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိနိုင်သည်။
အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်သုတေသီများက ဦး နှောက်ကိုနားလည်ပြီး neurotransmitter သိပ်သည်းမှု (receptors) အပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်မှုအားဖြင့် ဦး နှောက်ကိုနားလည်ပြီးရှင်းပြနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ပြနာမှာ ဦး နှောက်သည်ရှုပ်ထွေးသောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီးမည်သည့်ကိုင်တွယ်မှုမှမဆိုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ မရသောနည်းများဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲစေသည်။ အချို့သုတေသီများသည်အနာဂတ်တွင်နောက်ဆုံးဘုံမော်လီကျူးအပျော်အပါးလမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေရန်မျှော်လင့်ကြသည်။ သို့သော်ထိုလမ်းကြောင်းသည်ပြင်ပခြယ်လှယ်မှုများကိုတုန့်ပြန်ခြင်းဖြင့်အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေပြီးသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ထိုတွေ့ရခဲသောမော်လီကျူးလက်မှတ်၏အကျိုးကိုဘယ်တော့မျှရှာ။ မရနိုင်ပါ။ အကျိုးကျေးဇူး၏မော်လီကျူးလက်မှတ်ပေါင်းသေချာပေါက်ငြိမ်နှင့်မပြောင်းလဲပါ။
ဦး နှောက်တွင်အာရုံခံဆဲလ်ပေါင်းဘီလီယံ (၁၀၀) နှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်ပေါင်းဖိုအမျိုးမျိုးနှင့်အာရုံခံဆဲလ်အမျိုးမျိုးတို့ပါဝင်သော synapses ပေါင်းများစွာပါဝင်သည်။ ဦး နှောက်တစ်ခုချင်းစီတွင်ထူးခြားသောအရာဝတ္ထုပုံစံတစ်မျိုးနှင့်လူတစ် ဦး အတွက်သီးခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များပြောင်းလဲနေတဲ့တိကျသော neurotransmitter ပြင်းအား, အဲဒီ receptor ပရိုတိန်း, ဒါမှမဟုတ် ဦး နှောက် activation / ပုဂ္ဂလဒိexperience္အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဆက်စပ်မှုနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ခြယ်လှယ်မှုတိုင်းပြုလုပ်သောအခါတိုင်း ဦး နှောက်၏မူလလည်ပတ်မှုတွင်သိမ်မွေ့သောပြောင်းလဲမှုရှိသည်။ ဒီ Heisenberg ရဲ့“ မသေချာမရေရာမှုနိယာမ” ကို ဦး နှောက်အတွက်လို့ခေါ်မယ်။ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုများကိုကုဒ်ဖြုတ်သည့်အခါသင်မသိနိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်ပုဂ္ဂလဒိive္ experience အတွေ့အကြုံကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိပဲ ဦး နှောက်၏တစ်စုံတစ်ရာသောကဏ္ aspect ကိုတိုင်းတာ။ မရပါ။
ဦး နှောက်ကိုတိုင်းတာသည့် (မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသုံးခြင်းကဲ့သို့) ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလုံးဝနည်းလမ်းသစ်ဖြင့်ပြောင်းလဲစေသည် ဦး နှောက်၏လည်ပတ်မှုကိုလုံးဝမဖြစ်နိုင် အများအပြားအာရုံခံစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုအကြွင်းမဲ့အာဏာချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြရန်မအလွန်အမင်းရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်။ ပျော်မွေ့ခြင်းဟူသောစကားလုံးသည်လူအမျိုးမျိုးအတွက်အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်သဖြင့်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဒီ dopamine အတွက်ဘာကိုဆိုလိုသလဲ ငါကအပျော်အပါးနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ် (သို့) ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုပြောခြင်းသည်ဘေးကင်းကြောင်းကျွန်ုပ်ထင်သော်လည်းပုံပြင်အပြည့်အစုံမှာအလွန်ရှုပ်ထွေးသည်။